Uhlu lwefeksi lwabathengi base-Italy | Thenga Uhlu lweFekisi | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwefeksi lwabathengi base-Italy
Izinombolo zefeksi zabathengi base-Italy
I-LatestDatabase inikezela ngamanani wokuncintisana ngokuthumela i-fax blast yakho kumakhasimende futhi izokusiza uphumelele emkhankasweni wakho wokuthengisa ngefeksi. Ungathenga Uhlu lweFeksi lwabathengi base-Italy lwezinombolo zefeksi ezingama-750K, bese uqasha inkampani ukuthumela umyalezo noma isikhangiso sakho kulezo zinkampani, konke nje ngamakhulu ambalwa amadola.
Enye yezingxenye ezibaluleke kakhulu kunoma yimuphi umkhankaso wokuthengisa ifeksi ukuthi uqiniseke ukuthi unohlu olungcono kakhulu lokuthengisa lwefekisi Thenga kusuka kumthengisi wedatha onobuhle onjengeMail Uhlu lwethu lwefeksi lusha futhi uzothola isilinganiso esihle kakhulu sokuxhuma.
Thenga Izinhlu zeFekisi Zase-Itali B2C zase-Italy
Inani Lamarekhodi: 750K
Uhlu lwezinombolo zefekisi lwabathengi base-Italy luzokwenza konke kakhulu ukuze luhlangabezane nazo zonke izidingo zakho zohlu lwefekisi. Inokusekelwa kwamakhasimende okuphendulayo nokunamakhono, inkampani ingakusiza ukuba uqalise ukufakwa kuhlu lwakho ngokushesha nangempumelelo. Lolu hlu lwenombolo yefeksi yabathengi luyinto enhle ngempela nezinkampani ezikwazi ukwenza ngokwezifiso ukufakwa ohlwini ngokulandela amagama abathengi, uhlu lwezinombolo zefekisi, umuntu othintana naye, ikheli kanye nekhodi yendawo.
I-Database yamuva yokuthumela ama-imeyli noma i-latestdatabase.com icishe yenze imali ngezinhlu zayo ezingabizi eziye zaba izinqumo ezijwayelekile phakathi kwamabhizinisi ahlukahlukene neminye imikhiqizo enenani lentengo elinikeza izinkampani inzuzo ngaphezu kwabanye abasebenza embonini.
Uhlu lwezinombolo zefekisi lebhizinisi lase-Italiya olusuka eDatabase nge-Mailing Database noma ku-latestdatabase.com liqukethe amarekhodi angamaqiniso angama-750,000 abuyekeziwe wohlu lwezinombolo zefekisi elifinyelela ku- $ 1,050, ngokukhokha ngesikhashana esithile kanye nesoftware engalandelwa engaba yifomethi yefayela le-Excel CSV ongayikhokha ikhadi eliphakeme, i-PayPal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-visa, inyunyana yasentshonalanga nezindlela ezikhokhelayo.
Database Yeposi Lokugcina noma yakamuva yedatabase.com nayo inikezela ngezaphulelo zevolumu enomusa. Amanani abo ahlala afinyelela ngentengo yenqwaba ongakujabulela ukuthengisa imikhiqizo nezinsizakalo ezilethwa yinkampani. Ikuqinisekisa ikhwalithi abangakuqinisekisa ngokwaneliseka kwamakhasimende abazokuhlangabezana nezidingo zabo uma kukhulunywa ngohlu lwezinombolo zefeksi.
Umhlahlandlela weFekisi labathengi base-Italy Umbuzo nezimpendulo